ဗုံး များနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ဗုံး များနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ဗုံး များနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Posted by wunna on Apr 22, 2010 in 2010/2012/2015 Election |7comments
သင်္ကြန်အကျက်နေ့မှာ ဗုံး ၃ လုံးပေါက်တယ်။
အဲနောက်မှာ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ရက်ကျော်က လပြည့်ဝန်းပလာဇာမှာ ဗုံးပေါက်တယ်ဆိုပြီး သတင်းမှားတစ်ခု ထွက်တယ်။
မနေ့က၊ ယုဇနပလာဇာမှာ ဗုံးပေါက်တယ်လို့ သတင်းထပ်ထွက်တယ်။
ဒီ ၂ ခု ထဲက တစ်ခုများ မြင်ရကြားရမလားမသိ။
၁) နိုင်ငံတော်တစ်ဝှန်း လုံခြုံရေး အခြေအနေရ ရွေးကောက်ပွဲကို ရက် အကန့်အသတ် မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
၂) လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ မီဒီယာများကို ရွေးကောက်ပွဲသို့ လာရောက် လေ့လာခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မဲရုံ များတွင်လည်း လုံးခြုံရေများ တင်ကြပ်စွာ ချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
နိုင်ငံရေးတွေ မပါနဲ့ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာများလဲ ကိုမစ်ကီလေးရေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး မပါလို့ မလေ့လာလို့ မပြောလို့မရဘူး။ နိုင်ငံသား ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ လေ့လာတယ်၊ နားလည်တယ်ဆိုတာ နဲ့ အဲ့ဒီ့ နိုင်ငံ ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ထိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ နည်းသွားလေလေ အဲ့နိုင်ငံတိုးတက်မှု နှေးသွားလေလေပါပဲ။
တစ်ခု သိထားသင့်တာကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လမ်းပေါ်ထွက်အော်တာ၊ စစ်အစိုးရ မကောင်းကြောင်းပြောတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ မိမိ နိုင်ငံကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် တိုးပွားအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို သိအောင် လေ့လာတာ၊ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာ၊ ပံ့ပိုးတာ တို့ကို ဆိုလိုတာပါ။
ko wunna pyaw tar ko lat khan tal
wunna ပြောတာကို mintonemin ကလည်းလက်ခံတယ်နော် ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်းလူတွေက နိုင်ငံရေးကို မပြောချင်ဘူးဆိုတာ ညာပြောတာ အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း လုပ်လည်းမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ ယုန်ကလေးနှာစေးနေတာက ပိုများတယ်လေ ။ ဒါကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ ။
သင်္ကြန် ကို အင်းလျား မှာပေးမလုပ်တာ နည်းနည်း မင်းတို.ကို ညှာလိုက်တာ နေမှာ မင်းတို.ကို ညှာသလို ငါလည်း နာမည်မပျက်တော.ဘူး နို.မို.ဆိုရင် အင်းလျား က လူ6သိန်းလောက် ဆန်.မယ် မူးနေတဲ. ကောင်က4 သိန်း လောက်ရှိမယ် ငါဘာနဲ. ချောက်ချောက် မူးတဲ.ကောင် က ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး ဘေးမှာ ကောင်မလေးတွေကပါတော. ငမူးလေးတွေက သတ္တိပို ပြနေရင် ငါမနိုင်လောက်ဘူး ဒီတော. ဥာဏ်ပညာ ကြီးမားစွာ နဲ. နေရာေ့၇ွ လိုက်တာပေါ့ မင်းဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဟုတ်တယ်မှတ်လား ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ